I-Raw Bromelain powder hplc≥98% | I-AASraw Plant Extract powder
/ iimveliso / Utsalane lweZityalo / Bromelain powder
Udidi: Utsalane lweZityalo
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba le-Bromelain powder, phantsi kommiselo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Bromelain i-protein extract derived from stems of pineapples, nangona ikhona kuzo zonke izityalo zezityalo kunye neziqhamo. I-extract ineembali yokusetyenziswa kwamachiza abantu. Njengoko isithako sokutya, singasetyenziselwa njenge-tenderizer yeenyama, kwiindidi ezahlukeneyo zamachiza kunye nemifanekiso yophando malunga nokusebenza kwayo ngokufanelekileyo kwizifo.
Ividiyo yeBromelain powder
I-Raw Bromelain powder esisiseko Abalinganiswa
igama: Bromelain powder
Ukusetyenziswa kwePowder Bromelain
Bromelain Raw powder Names
I-Bromelain yazi nokuba yi-Enzyme enzymes, i-ananas enzymes.
I-Bromelain I-powder Raw Bromelain Ukusetyenziswa
Akukho namnye okucetyiswayo axelise umlinganiselo.
Isilumkiso kwiBromelain powder eluhlaza
I-Bromelain ayizange ifumaneke ingqinisululwazi ukuba isebenze ekuphatheni ezinye izifo kwaye ayizange ivunyiwe yi-US Food and Drug Administration ukunyangwa kwanoma yiyiphi ingxaki. EUnited States, umhlathi weMpilo yezeMpilo kunye nezeMpilo (DSHEA, 1994) ivumela ukuthengiswa kwe-bromelain eziqukethe izongezo zokutya nangona ukwenziwa komsebenzi akuqinisekanga.
I-Raw Bromelain powder Imiyalelo eyongezelelweyo
Kanye kunye ne-papain, i-bromelain yenye yezona zixhobo ezidumileyo ezisetyenziselwa ukuthambisa inyama. I-Bromelain ithengiswa ngefomati, edibaniswa ne-marinade, okanye ifafaze ngokuthe ngqo kwinyama engadliwayo.
Indlela yokuthenga i-Bromelain powder kwi-AASraw
I-11pi-Hydroxy canrenone methacrylate Powder (192704-56-6)
I-Powamcinolone acetonide Powder (3870-07-3)